သင့်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်မေ့လျော့သူအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ | Androidsis
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့မေ့လျော့နေပြီးသင်၏နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများကိုမှတ်မိရန်အသံသို့မဟုတ်အသံမှတ်စုများကိုများစွာအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်ယနေ့ငါတင်ပြမည့်လျှောက်လွှာသည်သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ ငါတင်ပြရန်နှင့်အကြံပြုရန်ငါသွားမည်။ မင်း အိမ်၏အများဆုံးမေ့လျော့ဘို့လျှောက်လွှာ သူကသူတို့ကိုအများကြီးကူညီပေးပါမည်အဖြစ်သူသည်surelyကန်အမှန်ချစ်ကြလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်ကငွေပေးချေပြီး ၁.၉၉ ယူရိုရှိတယ်။ ယခုနှင့်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်သင်အခမဲ့ရနိုင်ပါလိမ့်မည် ရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲ၊ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုချန်ထားခဲ့တဲ့ပူးတွဲဗီဒီယိုမှာမင်းကိုငါပြတာကိုသဘောကျရင်၊ Google Play Store တွင်ရောင်းရန်အချိန်မကုန်မှီ app ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပြေးပါ.
ငါကောင်းကောင်းပြောနေတာက application ရဲ့အမည်ပါ ဥာဏ်စမ်းငါဆိုသည်ကား ရက်အနည်းငယ်အကန့်အသတ်သာသာလျှင်၎င်းကိုသင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည် တရားဝင် Android application store မှ Google Play Store မှ
1 Braintoss ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ၄၈ နာရီသာအခမဲ့ !!
2 Braintoss မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာ၊
Braintoss ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ၄၈ နာရီသာအခမဲ့ !!
စျေးနှုန်း: € 3,49
ဥာဏ်စမ်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျီမေးလ်အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသောမည်သည့်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုမဆိုအသုံးပြုသည့်အန်းဒရွိုက် application တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့မေ့မသွားချင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပို့ပေးပါ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားရခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်းမှထွက်သွားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးမေ့လျော့များအတွက်လျှောက်လွှာ ဒါမှမဟုတ်သူတို့အားလုံးရှိသည်ချင်သောသူတို့အဘို့ သင့်ရဲ့ဂျီမေးလ်အကောင့်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည့်စုံစွာစီစဉ်ထားတဲ့သတိပေးချက်များ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
ထို့အပြင် Braintoss နှင့်ရိုးရှင်းသောခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်စာရင်းပြုစုထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Gmail အကောင့်သို့အပြည့်အဝအလိုလျောက်ပို့လိမ့်မည် ရိုးရိုးလေး၊ ထိရောက်တဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုကဲ့သို့
ယခုအချိန်တွင်ရိုက်ကူးထားသည့်ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးမှသော်လည်းကောင်း၊ Flash နှင့်ဖြစ်စေပေးပို့ခြင်းမပြုပါနှင့်။
ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးသိပ်မလုပ်တဲ့ application တစ်ခုနဲ့တူနေပေမယ့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ် Valencia လရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း \_ t Braintoss သည် Android အတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား application ဖြစ်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလွန်အသုံးဝင်သည်.
Braintoss မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Gmail အကောင့်သို့ပို့သည့်အသံမှတ်စုဥပမာ
Braintoss မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Gmail အကောင့်သို့ပို့သည့်ဓာတ်ပုံ၏ဥပမာ
Braintoss ကိုအသုံးပြု။ ယူတဲ့စာသားမှတ်စု၏ဥပမာ
ဤစာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုတွင်လျှောက်လွှာမည်မျှအလုပ်လုပ်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်၎င်းကိုမည်မျှအသုံးချနိုင်ကြောင်းကိုပြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူဤကန့်သတ်အချိန်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်လွတ်မပါဘူး လျှောက်လွှာကိုနောက် ၄၈ နာရီသာအခမဲ့ကူးယူပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင့်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အများဆုံးမေ့လျော့ခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခု
သင်ပုံရိုက်သည့်အခါ Instagram သည်အကြောင်းကြားစာပေးပို့လိမ့်မည်
Meizu M6s: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ